Yekumhanyisa-firimu Yekuputira Inofa Series - China Yekumhanyisa Firimu Yekunamatira Die Series Mutengesi, Fekitori -Jwell
Yekumhanyisa-kumhanya Firimu Kuputira Die Series
Jwell Kambani yemadhiya ekumhanya-mhanya kufa inotora T-mhando gobvu kumucheto pamwe neyekugadzirisa gadziriso senzira yekurerutsa chigadzirwa upamhi switching oparesheni uye online kugadzirisa. Imwe yega yakazvimirira pamupendero yekugadzirisa system inogona kudzikisira iyo gobvu yekumucheto nyaya. Saka zvinobudirira kudzikisa marara epolymer uye substrate. Izvi zvinofa zvakakodzerwa nezvibereko hupamhi pazasi pe5000mm, ukobvu hwe0.012-0.12mm yePP, PE, PET, EVA yekumonera zvigadzirwa.
Kurumidza uye nemazvo gadziridza hupamhi, iko kuita kwese kwekuvhara gungano kupedzisa hupamhi
kugadzirisa. Kana zvigadzirwa zvangozadzikisa zvinodiwa nehupamhi hwehupamhi zvinodiwa, gadzirisa masisitimu eiyo yekuvhara system yakagadzika pasi mushure mekudzokororwa gadziridza hupamhi haisisiri kugadzirisa zvekare kuvhara system.
Kurumidza kuchenesa-uye kugadzirisa. Anoshanda anogona kukurumidza kuvhura iyo gobvu kumucheto upamhi hwekugadzirisa system, isa iyo yendarira inokwenenzvera kubvisa kabhoni polymer.
Yakanyatsoita basa yekuisa chisimbiso Sisitimu: Inoshandisa yakasarudzika kutonhora seali ng chimiro, kuona iyo yakareba-nguva
kugadzirwa kwepurasitiki hakubudi.
Chengetedzo: Inotora kuvharwa kusina kukwana kweyakavakirwa-mukati simbi isina kupisa kupisa, kugona uye kuchengetedza simba.
PVC WPC Door Bhodhi Yekuwedzera Mutsara
JWZ-BMQC05D / 12D / 20D Double Station Ridzai richigadzirisa Machine